musha EUROPEAN FOOTBALL STORies Spanish Vatambi Vatambi Ansu Fati Zvekuchecheche Nyaya Plus Untold Biography Facts
LB inopa Nyaya Yakazara yeBhola Genius uyo anozivikanwa chaizvo se "Fati". Yedu Ansu Fati Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi inounza kwauri nhoroondo yakazara yeanozivikanwa zviitiko kubva paudiki hwake nguva kusvika zvino.
Ansu Fati Nyaya Yehucheche Nyaya - Iyo Ongororo Kunze. Kiredhiti AS uye UEFA.
Kuongorora kunosanganisira hupenyu hwake hwepakutanga, kumashure kwemhuri, dzidzo / basa rekuvaka, kutanga kwehupenyu hwehupenyu, nzira kune mukurumbira nyaya, kusimuka kune mukurumbira nyaya, hukama, hupenyu hwomunhu, mararamiro, mhuri yemhuri nezvimwe.
Ehe, munhu wese anoona Fati sechinhu chikuru chinotevera munhabvu yenyika. Nekudaro, vashoma chete ndivo vanofunga Ansu Fati's biography iyo inonakidza kwazvo. Iye zvino pasina kumbopfuurira mberi, ngatitangei.
Ansu Fati Mwana Wechidiki Nhau Uye Untold Biography Chokwadi - Upenyu Hwekutanga uye Mhuri
Anssumane Ansu Fati akaberekwa pazuva re31st raGumiguru 2002 kuna baba vake, Boji Fati (aimbova mutyairi) uye amai, Lurdes Fati (muridzi wemba) muBissau, Capital of Guinea-Bissau, West Africa. Ansu akauya pasi pano semwanakomana wechipiri uye mwana kunze kwevana ve5 vanozvarwa kuvabereki vake vaanoda vanoratidzwa pazasi.
Ansu Fati Vabereki-Baba Vake- Boji Fati naAmai- Lurdes Fati. Kiredhiti VakakurumbiraBuzz
Makore mana Ansu Fati asati aberekwa, kurwa kwakaitika munyika yake. Izvi zvakateverwa neuto remauto mu2003, gore rimwe paakazvarwa. Yakabatana yakasiya nyika yake matongo uye ikawedzera urombo. Vabereki vaA Ansu Fati vakatya remangwana revana vavo uye izvi zvakakonzera kuti Bori baba vake vasiye Guinea-Bissau vachinotsvaga mafuro manyoro kunze kwenyika.
Bori akatanga kutamira kuPortugal kwaakange aine akundikana kuyedza kutanga nhabvu nhabvu mumakirabhu ezasi. Ndichiri kuPortugal, Bori akanzwa runyerekupe rwekuti Marinaleda, Manispa kuSpain yaipa basa kunevanobva kune dzimwe nyika. Baba vaAuu vakakurumidza kubva kuPortugal kuenda kuSpain kunotora basa.
Nehurombo, rombo rakamupera muSpain Bori paakatanga kukumbira chikafu mumigwagwa yeMarinaleda. Zvakatora mwedzi mishoma mukana usati wasvika sezvo Bori Fati akasangana meya Marinaleda muSeville uyo akamupa basa sa driver.
Ansu Fati aimbove mutyairi kuna Meya weMarinaleda. Kiredhiti FB
Mushure mekukwezva mukuru wake nekuzvininipisa kwake uye kushanda nesimba, The Major weMarinaleda akafunga kubatsira Bori kuunza mudzimai wake nevana (kusanganisira Ansu) kubva kuGuine-Bissau kuenda kuSpain. Ansu Fati, amai vake, vanun'una (Braima naMiguel) uye hanzvadzi (Fati Djucu) vakatamira kuSpain aine makore matanhatu.
Ansu Fati Mwana Wechidiki Nhau Uye Untold Biography Chokwadi - Dzidzo neKubata Buildup
Waizviziva here? Baba vaAuu Fati vaimbova mutambi wenhabvu panguva yavo kuGuinea Bissau. Iwe aifanirwa kuenda pamudyandigere kubva pabasa rake raibhadhara mari shoma kuitira kuti atsvage mukana uri nani muPortugal maakakundikanawo kuzviita, achimanikidza basa. Zvakanga zvakandiomera kuti Bori abate pamudyandigere pakugadziriswa muSpain. Akafunga zano kuvanakomana vake kusanganisira Ansu nezvekuita bhora.
Iro 2009 raive gore rakaoma kune nhabvu yeSpain seReal Madrid C Ronaldo. Ansu Fati akafananidzirwa pazasi panguva iyoyo aive faniro reReal Madrid raitevera chikamu chega chezviitiko zvekirabhu kusanganisira kunamata mashura.
Ansu Fati- Dzidzo uye Basa Rekuvaka.
Paaive achiri kudzidza mutambo uyu, mukoma wake Braima aive mberi. Kubudirira kwemitambo yemhuri yavo kwakatanga kubva kumukoma wake Ansu mukoma waBraima Fati akapasa miedzo uye akasaina naSevilla FC. Kutungamira nemuenzaniso, kufarira kwa Ansu kumutambo uyu kwakamuona achienda kumiedzo naSevilla uye mimwe makirabhu ari pedyo. Panguva iyo Sevilla FC yakapera, akagamuchirwa neclub yake yaive pedyo yainzi Herrera.
Ansu Fati Mwana Wechidiki Nhau Uye Untold Biography Chokwadi - Basa Rokutanga Upenyu
Ansu Fati akatora mwaka naHerrera asati azopedzisira azvigamuchira naSevilla FC. Nekuti aive akanaka, vese Real Madrid neFC Barcelona academy scouts akauya achidzingirira mushure mekusaina kwake. Mumashoko ake;
"Ndakanga ndiri paSevilla pakasvika Real Madrid, ichindipa mamiriro ari nani pane Barcelona. Kaviri kirabhu yakauya kumba kwemhuri yangu kuzotendisa vabereki vangu. Kukura uku kwakashatirisa Sevilla sezvavaida kuti ndigare, ndabatsira hama yangu ”
Nekuda kwekutamisa matambudziko ekurasikirwa neyemwana nyeredzi, Sevilla akasiya Ansu asina kutamba nhabvu kwegore. Izvi hazvina kugadzira chero kunonoka kudzora zviroto zvake kuti ave pro. Mukuita, FC Barca academy- Le Masia aifanira kuita kuti awane mukomana asina klabhu. Vakatora ane makore mapfumbamwe okukura, Ansu Fati ndokumupa hwaro hwaidikanwa hwokutanga-basa rake.
Ansu Fati Upenyu hwepakutanga neLemasia. Kiredhiti VakakurumbiraBuzz
Ansu Fati akakurumidza kuita fungidziro neFC Barcelona inozivikanwa mudzidzi La Masia. Waizviziva here? Aimbove shamwari pamwe naye Takefusa Kobo AKA The Japanese Messi pamberi hupenyu hwakavaparadzanisa sezvo Kobo akabatana neReal Madrid. Vaviri vana (vanoratidzwa pazasi) avo vaive shamwari dzepedyo vaivewo vatambi vepamusoro pakudzidza pane dzakawanda nguva. Zvishoma zvavanoziva kuti vaizove vapikisi pamberi pemazuva ekuzvarwa kwavo 20th.
Ansu Fati naTrumpfiku Kubo vakagadzira misoro panguva yemazuva avo kuLa Masia. Kiredhiti Trome
Ansu Fati Mwana Wechidiki Nhau Uye Untold Biography Chokwadi - Mugwagwa Mukurumbira Nhau
Ansu Fati akatanga kuita fungidziro naLa Masia kunyangwe makore ake okuyaruka. Waizviziva here?… Akafambisa masheya nekukurumidza kuva mukuru muchirongwa ichi.
Hufakazi hwekuti Ansu Fati aimbove La Masia kaputeni. Chikwereti kuna IG
Panguva chaiyo apo Ansu akange ave kuda kuratidza kukosha kwake semutungamiriri, nguva yakaderera pane yake basa rehudiki yakaitika. Akatyoka kaviri gumbo. Ichi chiitiko chisina kujairika chakaitika muna Zvita 2015 apo mutoro wakaoma kubva kuna Espanyol defender wakasiya Ansu Fati aine vaviri yakaputsika tibia uye fibula pagumbo rake rekurudyi. Izvi zvakamumanikidza kupinda mumwedzi gumi munzira uye nguva yakawanda muchipatara. Pazasi paBraima ari kutamba chinzvimbo chehama huru achigara padivi pemukoma wake panguva yake yekupora.
Ansu Fati akachengetwa nemukoma wake panguva yekupora. Chikwereti kuna IG
Ansu Fati Mwana Wechidiki Nhau Uye Untold Biography Chokwadi - Kumuka Mukurumbira Nhau
Vazhinji vateveri vanoziva Ansu Fati vangabvuma kuti gumbo rake rakakuvara zvimwe ndiro raizochinja basa rake. Achiri pamubhedha wake wekupora, kutsunga kwa Ansu Fati kungokura chete uye akadzoka akakodzera pamwe nechinhu kuratidza rAther pane kuumbika. Akatsungirira kukwikwidza kusimudzira kusvika mukurumbira mumwedzi ichangodarika kuti ive imwe yenzvimbo dzinopisa kwazvo dzeFC Barcelona's academy.
Meteoric ya Ansu Fati inosimuka kusvika mukurumbira mushure mekupora kubva mukukuvara. Chikwereti kuna IG.
Ansu Fati akatonga nhabvu yevechidiki uye akaramba achidaro mushure mekupora. Pa 24 Chikunguru 2019, akasaina kontrakiti yake yekutanga inyanzvi neFC Barcelona timu yepamusoro, achibvumirana muchibvumirano kusvikira 2022. Panguva ino, achangobva kufambidzana naye, nhengo imwe neimwe yeimba yake yakatanga kunetseka nekuda kwekubuda kwake.
RUDZIKI: Kumirira kuchiripo, Ansu Fati uyo aive aine makore 16 panguva iyoyo aive nemvumo pasi pesimba reSpanish rekusaita nhabvu kamwechete yaive 9 pm. Mitemo muSpain inodaidzira kuti makirabhu haakwanise kutamba vatambi vasati vasvika panguva yemasikati kugadzirira kunze kwekunge vatambira mvumo kubva kuvabereki vavo.
ne Ousmane Dembele uye Luis Suarez akakuvara, maneja waBarca Ernesto Valverde akafunga kupa Ansu Fati. Sezvineiwo mukomana kubva kuGuinea Bissau, vabereki vake vakabvumirana naye kuti abve pamba kuitira kuti aende kunodzivirira husiku uye kuzadzisa zviroto zvake.
Ansu Fati aingova makore 16 uye mazuva 298 panguva iyo yaakawana yekutanga maminitsi akakwirira pasi pebhandi rake. Izvi zvekutanga zvakamuwanira mubairo wekuva mutambi wechidiki kumiririra kirabhu kubvira 1941 mushure meVicenc Martinez (makore 16 nemazuva 280). Ansu akafananidzirwa pazasi akahwinhawo rekodhi yekuva wechidiki weLaquiga Barcelona weLaLiga.
Ansu Fati akakunda rekodhi yekuva Barca mudiki weLaLiga zvibodzwa. Kiredhiti SL
Waizviziva here? Kuonekwa kwa Ansu nechinangwa chake kwakakwira kubva kuvanhu vazhinji, kusanganisira Thiago, mwanakomana wa Lionel Messi iye wakamutarisa kubva pamire. Pasina mubvunzo, Ansu aratidzira pasirese kuti ndiye anotevera akavimbika ezvibodzwa zvekubatanidzwa kweAfrica nechikwata chechikwata chakarova mushure Samuel Etoo. Vamwe vose, sezvavanotaura, inhoroondo.
Ansu Fati Mwana Wechidiki Nhau Uye Untold Biography Chokwadi - Ukama Hupenyu
Nekusimuka kwake mukurumbira, zvine chokwadi chekuti vateveri vazhinji vangadai vakabvunza kuti musikana waA Ansu Fati angave ari ani. Hapana kuramba chokwadi chekuti mucheche wake kumeso, kutaridzika kwakanaka pamwe chete nemaitiro ake ekutamba hazvingamuitire muzambiringa unotapira kune vakadzi.
Ansu Fati Musikana musikana ndiani? Chikwereti kuna IG
Sezvo panguva yekunyora, zvichienderana neruzivo pane yake yemagariro media piki, zvinoita Ansu Fati aifarira kutarisa basa rake. Iko hakuna ruzivo rwunotaridza chero chinhu chakajeka pahupenyu hwake hwakavanzika. Chokwadi ichi chinoita kuti zviome kune vezvenhau kuunganidza chero info nezve yake yazvino rudo hupenyu uye kufambidzana nhoroondo.
Nekudaro, nekuda kwehudiki hwake uye chokwadi chekuti FC Barcelona inogona kuregererwa kune vechidiki vasingakwanise kufadza, zvinogoneka kuti Ansu Fati anogona kunge asiri kufambidzana naani zvake asi zvakadaro, achitarisa pakuita kuti ive huru neiyo Spanish hofori. Asi ndiani anoziva? !!… Kune vazhinji vechidiki vezera rake vanoramba vaine vasikana. Nekudaro, isu tinogona kuramba tichifungidzira kuti anogona kunge aine musikana asi anosarudza kwete kuzviita pachena.
Ansu Fati Mwana Wechidiki Nhau Uye Untold Biography Chokwadi - Upenyu hwehupenyu
Kusvika pakuziva hupenyu hwa Ansu Fati kwaizokubatsira kuwana mufananidzo uzere wake.
Kutanga kuenda, anokurumidza-kunyepedzeka uye akangwara, mumwe munhu anozotsvaga kusvikira awana nzira yake yakasarudzika yekutarisira kwakanyanya. Zvakare, Ansu Fati mumwe munhu anogona kuenzanisa nyore nyore nemasimba (ese ari maviri akanaka uye akaipa) anomupoteredza. Chekupedzisira, iyewo anofunga zvakadzama uyo dzimwe nguva anosarudza kuve ega uye kure nezvose kuitira kuti adzore simba rake.
Ansu Fati Hupenyu Hwechokwadi Chokwadi- Kusvika pakuziva hunhu hwake. Chikwereti kuna IG
Ansu Fati Mwana Wechidiki Nhau Uye Untold Biography Chokwadi - Upenyu hweMhuri
Iwe haufanirwe kuzvarwa uine sirivheri mbichana mumuromo mako kuti uwane zvinhu zvikuru muhupenyu. Aya mazwi anobata uremu hwakakura kuna Ansu Fati uye mumwe nemumwe wevemhuri yake akafananidzirwa pazasi.
Ansu Fati Mhuri Mhuri. Chikwereti kuna IG
Baba vaAuu Fati Bori vakamboenda pamanzwiro vachitaura nezvemutambo wavo wekutanga wemakwikwi weBarcelona. Nemashoko ake: "Zvino ini ndinogona kufa nhasi! Hupenyu hwangu hwazadzikiswa nanhasi kunyangwe rufu rwasvika. ”Bori anodaro paradio yemunharaunda mushure mekuona mwanakomana wake achigadzira bvunzo. Ari kutenderedza midhiya kusasiyana nemukadzi wake (Ansu Fati's mum) anochengeta chimiro chakaderera.
About Hama dzaAuu Fati: Zvese zva Ansu Fati zva hama dzinoti; Braima (mukuru wake) uye Miguel (wepedyo mudiki) uye Miguel (wechidiki) ndivo vatambi venhabvu, iwe hauna kubudirira sa Ansu.
Waizviziva here? Mudiki pane mukoma weAuu Fati (Miguel) ishamwari yepedyo uye shamwari yake Thiago Messi (Mwanakomana waLionel Messi). Ose ari panguva yekunyora anopinda FC Barca's academy- La Masia. Tichitarisa nezera uye nguva iyo mhuri yaFati yakatamira kuSpain, zvine chokwadi kuti akanaka Miguel (akafananidzirwa pazasi) akaberekerwa muSpain.
Sangana naMiguel Fati- Munun'una wa Ansu
Asides Braima (mukuru weAu Ansu), vamwe vehama dzake vanoridzira FC Barcelona iyo inozivikanwa academy La Masia. Mukoma mukuru ane hanya naBraima parizvino ari pachikwereti cheCalahora panguva yekunyora.
Ansu Fati Mukoma- Miguel Fati. Chikwereti kuna IG
Nezve hanzvadzi yaAuu Fati: Djucu ihama yakaisvonaka yeAuu Fati. Aigona kuve gore ramakore maviri mudiki pane mukoma wake Ansu. Sekureva kwake Instagram account, Djucu anopemberera zuva rake rekuzvarwa chero munaJanuary 20th.
Sangana na Ansu Fatis Sista- Djucu Fati. Chikwereti kwaari IG Akaunti
Ansu Fati Mwana Wechidiki Nhau Uye Untold Biography Chokwadi - LifeStyle
Kuna Fati, pane musiyano wakajeka pakati pekutamba nhabvu nekutandara. Kana mwaka wenhabvu wapera, Ansu Fati anofarira kuzvinakidza iye kuIbiza nedzimwe nzvimbo dzakanaka muSpain. Iye anowanzoonekwa aine rwendo rwega pamusoro yacht uye chikepe.
Ansu Fati- Anoda gungwa reSpain uye Nyika. Chikwereti kuna IG
Ansu inorangwa zvakakwana kuti inonamire kubhajeti. Semuenzaniso, iye anonamira kune avhareji mota uye isina-simba mabhureki. Haatyiwo nekushanda nesimba kwekuzviunza iye nemhuri yake mune iri nani mari.
Ansu Fati Mota uye Ride- LifeStyle Chokwadi. Chikwereti kuna IG
Ansu Fati Mwana Wechidiki Nhau Uye Untold Biography Chokwadi - Untold Fact
Kutonhorera Shamwari naLionel Messi: Ansu Fati's husiku hwemashura paakafunga yake yekutanga La Liga chinangwa chake zvakatoita nani mushure mekuridza muridzo. Maizviziva here?… Mushure memutambo, rombo rakakwenenzverwa rakagamuchira kumbundira kunodziya mugero naLionel Messi anofara. Iyo yakawanda-nguva yepasirose yepamusoro mutambi akagovana pikicha (pazasi) pa Instagram account yake iyo yakawana kudarika 6.3 mamirioni kufarirwa panguva yekunyora.
Ansu Fati naLionel Messi shamwari dzakanaka
Waizviziva here? Kuva pedyo kwaA Ansu Fati naMessi kuri zvakare nekuda kwehukama hwakagovaniswa pakati pehama yake mudiki nemwanakomana wemu superstar, Thiago Messi.
CHOKWADI CHINOGONA: Tinokutendai nekuverenga yedu Ansu Fati Yehuvana Nyaya uye Untold Biography Chokwadi. At LifeBogger, isu tinoedza kururamisira uye kusaruramisira. Kana ukawana chimwe chinhu chisingatarisi zvakanaka, tapota shandisa nesu nekupindura pasi apa. Tichagara tichikoshesa uye tichiremekedza pfungwa dzako.
Marcos Alonso Childhood Nhau Plus Untold Biography Facts